पूर्व आर्मीको शं*कास्पद मृ* त्यु, मा* रेको परिवारको दाबी, ८ लाख लिएर जुवा खेल्दा यस्तो - Public 24Khabar
Home News पूर्व आर्मीको शं*कास्पद मृ* त्यु, मा* रेको परिवारको दाबी, ८ लाख लिएर...
पूर्व आर्मीको शं*कास्पद मृ* त्यु, मा* रेको परिवारको दाबी, ८ लाख लिएर जुवा खेल्दा यस्तो
केही दिनदेखि दाँत दुखेर साह्रै समस्या भएपछि उनी अस्पताल पुगेका थिए। अस्पतालमा डाक्टर अक्वीला श्रेष्ठको टिमका सदस्य ओरल एण्ड म्याग्जिलोफेसल सर्जन सुमित सिंहले दाहालको दुखेको दाँत फुकालिदिएका थिए।
दुखेको दाँत निकाले पनि प्रचण्ड स्वस्थ हुन सकेका छैनन्। बोल्न समस्या हुने भएपछि उनी घरमै आराम गरिरहेका छन्।
दाहालजस्तै धेरै नेपालीलाई दाँतको समस्या हुन्छ। दाँत दुख्दा यति असह्य पीडा हुन्छ की नेपाली समाजमा एउटा भनाइ नै छ- दाँत दुख्ने रोग शत्रुलाई पनि नलागोस्!
दाँत किन दुख्छ? दाँतलाई कसरी स्वस्थ राख्ने र रोग लागिहाले के उपचार गर्ने? भन्नेबारे सेतोपाटीका सन्जिब बगालेले नेकपा अध्यक्ष दाहालको दाँतको उपचार गरेकी डाक्टर अक्वीला श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छन्:
हामीले खाएको खानेकुरा दाँतको वरिपरि टासिन्छ, दाँत राम्रोसँग सफा गरिएन भने दिनदिनै खानेकुरा टासिँदै जान्छ।दाँतमा जम्मा भएको खानेकुरा मुखमा भएका हजारौं किटाणुका कारण एसिड बन्छ। त्यही एसिडले दाँत बिगार्न थाल्छ। त्यसैलाई बोलीचालीको भाषामा किरा लागेको भनिन्छ। दाँतमा किरा लाग्ने भनेको किरा नै निस्किने भन्ने होइन। मुखमा रहेको किटाणुले बनाउने एसिडले दाँतलाई बिस्तारै बिगार्दै लैजाने भन्ने हो।
दाँतको अर्को रोग भनेको गिजाको रोग हो। गिजाले दाँतलाई समातेर बसेको हुन्छ। दाँत सफा गरिएन भने गिजामा असर गर्छ। दाँतको भागमा लेउजस्तो जमेको हुन्छ।
यसलाई निकाल्न प्रत्येक १२ घन्टामा ब्रस गर्नुपर्छ। सफाइ नगरे गिजा र हड्डीलाई असर गर्छ। यसले गिजा सुन्निने, रगत आउने, सास गन्हाउने हुन्छ। अझै लापरबाही गर्दै गयो भने किटाणु जम्दै जान्छन् अनि दाँत पनि हल्लिन थाल्छ।
यस्तो अवस्थामा या त ठुलै अपरेशन गर्नुपर्छ वा दाँत निकाल्नुपर्छ।
त्यसपछि डेन्टल फ्लसको सहयोगले यो काम गर्न सकिन्छ। एउटा धागोले दाँतको बीचबीचमा सफा गर्नुपर्छ। यो काम सुरूमा झन्झटिलो जस्तो लागे पनि १ मिनेटमै काम सकिन्छ।
दाँत र गिजा सफा गराउनपर्छ र हरेक छ महिनामा यसको परीक्षण गर्नुपर्छ। यति गरियो भने खर्च पनि धेरै हुँदैन।
आजकाल भोजको खाना र जंक फुडले दाँतको समस्या बढाएको छ। शहरमा दाँतमा किरा लाग्ने र गाउँमा गिजामा समस्या देखिने गरेको छ।
शहरमा प्याकेटको खाना बढी हुने र गाँउमा तुलनात्मक रूपमा कम देखिँदा शहरमा दाँतको समस्या बढी छ। चिकित्सकहरूले प्याकेटको खाना रोगको दाना भनेर थेगो नै बनाएका छन्। प्याकेटको खाना त बच्चाहरूलाई दिन सकेसम्म निषेध नै गर्छौं।
(दन्तरोग विशेषज्ञ अक्वीला श्रेष्ठ नेपाल मेडीसिटी अस्पतालकी दन्त विभाग प्रमुख हुन्।)‌
Previous articleमलेसिया गएको १४ बर्ष भयो अर्को केटि संग वास्तविक यस्तो रहेछ हेर्नुस् (भिडियो हेर्नुहोस्)
Next articleभर्खरै भारतमा चल्यो रु* वाबासी, भारतको सीमा नजिक चीनले यस्तो गर्दै राष्ट्रपति सीको क *डा आ’देश !